Sunday October 24, 2021 - 17:21:39
Waxaa xoogeystay dagaalkii cuslaa ee ka socday deegaanka Guriceel ee dhaca bartmaha dalka Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya Galguduud ayaa sheegaya in dagaal galay maalintii 2aad uu ka socdo Guriceel, sida ay wararku sheegayaan dagaalkii maanta dhacay ayaa looga gacan sarreeyay maleeshiyaadka Suufida Qabuura caabudka ah.
Ciidamada DF-ka iyo kuwa maamulka Galmudug ee isgarabsanaya ayay usuurtagashay in ay dib uqabsadaan saldhigga Booliska,xarunta degmada iyo inta badan xaafadaha Guriceel.
Dagaallada ugu culus ayaa hadda ka socda jaamacadda Guriceel halkaas oo ay ku go'doonsanyihiin maleeshiyaadka uu madaxda u yahay Max'med Shaakir, waxaa fashilmay wadahadallo udhaxeeyay Suufida iyo maamulka Galmudug wadahadalladaasi oo lagu doonayay in xabadda lagu joojiyo.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidamo gurmad ah oo DF-ka uga yimid dhanka Dhuusamareeb ay madaafiicda hoobiyaasha ku garaacayaan xarunta Jaamacadda oo ah meesha kaliya ee kusoo hartay gacan ku heynta kooxaha Mushrikiinta qabuura caabudka ah balse isugu yeera Ahlusunna.
ilaha caafimaadka Guriceel ayaa sheegaya in dad kabadan 90 ruux ay ku dhinteen dagaallada halka boqolaal kale ay dhaawacyo soo gaareen, inta badan isbitaallada magaalada ayaa ku xirmay madaafiicda ay dhinacyadu isdhaafsanayaan.
Saraakiil uhadlay maamulka 'Galmudug' waxay sheegeen in ay soo afjari doonaan maleeshiyaadka kooxda isugu yeertay Ahlusuna islamarkaana ay ugu baaqayeen isdhiibid.
Maxkamad islaami ah oo go'aan kasoo saartay dhul laysku heystay oo ku yaalla degmada Yaaqshiid [Dhageyso].